REENOEMANN: ပြည်တော်ပြန် အပိုင်း - ၁
Posted by Ree Noe Mann at 11:53:00 AM
ဖတ်ရတာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ. ဟုတ်တယ် ပုံပါထည့်ပါ. ၂၅၀၀ေ ချတယ်ဆိုတာသိတ်နားမလည်ဘူး။
အမခင်ဦးမေ ..... ကျနော်တို့ အလုပ်က ရောက်ပြီး ခြောက်လကစလို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ရာစုရတယ်ဗျ။ လေးနှစ်ဆိုတော့ လေးထောင်ထောင်လောက်ရှိနေပြီလေ။ ဒါကြောင့် ကျနော်က ၂၅၀၀ ပြန်ချေးသွားတာလို့ ပြောတာပါဗျ။ ကိုယ်ပိုက်ဆံ ကိုယ်ပြန်ချေးရတဲ့ ပုံစံပေါ့။ ပိုက်ဆံတွေအကုန်လုံးတော့ အပြီပြန်မှ ပြန်ရမှာ။ ဒါကြောင့် ချေးတာလို့ပြောတာပါ
ဆက်ရေးပါဦး...း) အဲ့လို အိမ်အပြန်ပိုစ့်လေးတွေ ဖတ်ရတာ..ရိုးကို မရိုးဘူးး)